‘रेडियो अन ह्विल्स’को अनुभव कस्तो रह्यो ? - संवाद - नेपाल
‘रेडियो अन ह्विल्स’को अनुभव कस्तो रह्यो ?
‘नायिका होइन, गायिकाको परिचय नै ठीक’
‘गाला रातै...’ र ‘स्लोली स्लोली...’ गीतबाट हिट बनेकी हुन्, गायिका मिलन अमात्य । भारतको आसाममा जन्मिएकी मिलनले त्यहाँ १० वर्षसम्म गाइन् । नेपाल आएर मिलन एल्बम निकालेपछि नै चर्चा कमाउन थालेकी मिलनले रेडियो कान्तिपुरले आयोजना गरिरहेको देशव्यापी कार्यक्रम ‘रेडियो अन ह्विल्स’मा प्रस्तुति दिइन् । उनले दमकदेखि वीरगन्जसम्मका पाँचवटा सहरमा आफ्नो क्षमता पनि देखाइन्, श्रोता–दर्शकसामु । यही सेरोफेरोमा मिलनसँगको संवाद :
रमाइलो भयो । कहीँ अपेक्षा गरेभन्दा बढी अडियन्स आए भने कहीँचाहिँ सोचेभन्दा कम । तर, समग्रमा कार्यक्रम निकै सफल रह्यो । काठमाडौँ मात्र होइन, काठमाडौँबाहिर पनि नेपाल छ भन्ने बुझाउन यो कार्यक्रमले मद्दत गर्‍यो ।
प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?
काठमाडौँबाहिर नेपाली गीत–संगीतलाई निकै माया र यसका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूको ठूलो जमात रहेछ ।
भारतदेखि नेपाल आगमनचाहिँ कसरी भयो तपाईंको ?
खासमा म आफ्नो पहिलो एल्बम नेपालबाटै रिलिज गर्न चाहन्थेँ । त्यही सिलसिलामा नेपाल आएकी थिएँ ।
तपाईंले एक दशकसम्म भारतमै बसेर गाए पनि बढी चर्चा पाउन भने नेपाल नै आउनुपर्‍यो नि ?
मैले उता पनि एउटा लेभलको सफलता पाइसकेकी थिएँ । अहिले पनि मैले गुहावटीमै बस्दा गाएका गीत–संगीतमा त्यहाँका नेपालीहरू नाच्ने–गाउने गर्छन् । मेरो चर्चा उतै छँदा पनि भएको थियो । नेपाल आएर गाएपछि झन् धेरै चर्चा पाएँ ।
नेपालमा बढी चर्चा पाउनुको कारण के रहेछ त ?
नेपाली गीत–संगीतको बजार भारतमा भन्दा नेपालमै ठूलो छ । फराकिलो बजार भएकाले पनि मलाई यहाँ आफ्नो प्रतिभा स्थापित गर्न सजिलो भयो ।
भारतमा जन्मिएर नेपाल आएपछि गीत–संगीतमा स्थापित हुनेहरूको संख्या धेरै छ । तपाईंलाई पनि त्यही लोभले नेपाल डोर्‍याएको हो ?
साँच्चिकै भन्नुपर्दा मलाई यस्तो इतिहासबारे केही थाहा थिएन । नेपाल आएपछि मात्रै थाहा पाएँ, नेपाली मूलका भारतीयहरूले यहाँको गीत–संगीतको शिखर छोएका रहेछन् । मचाहिँ खालि आफ्नो काम गर्छु, आफ्नो प्रतिभालाई अगाडि बढाउने सोच राखेर मात्रै नेपाल छिरेकी थिएँ । नेपालीपनको गीत–संगीतमा काम गर्न नेपालमै बसेर जति न्याय गर्न सकिन्छ, भारतमा बसेर सकिँदैन भन्ने सोचले आएकी हुँ ।
आसामी, बोडो, राजस्थानी भाषामा समेत गाउनुभएको छ । तर, नेपाली भाषाको गायनमै किन लाग्नुभयो ?
हो, मैले अन्य भाषाका गीत पनि गाएकी छु । मैले हिन्दी भाषामै पनि सन् २००३ मा एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता जितेकी थिएँ ।
नेपाली गीततिरै चाहिँ किन ढल्किनुभयो ?
सायद आफ्नो ‘ जिन’ नेपाली भएकाले होला । फेरि मलाई मेरा बा पनि नेपाली कला, संस्कृतिबारे सानैदेखि बखान गर्नुहुन्थ्यो । आसाममा जन्मेहुर्के पनि नेपालीपन मेरो हृदयमा बिर्सनै नसक्ने गरी गढेको रहेछ ।
तपाईंलाई सुरुमा गायिका अञ्जु पन्तको विकल्प वा प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको थियो है ?
अञ्जु दिदीलाई म एकदमै सम्मान गर्छु । उनका गीत मलाई निकै मन पर्छन् । सबै कलाकारको आ–आफ्नै ‘लेबल’ हुन्छ । कसैको कोहीसँग तुलना गर्न सकिँदैन । सबैले आफ्नो स्थान आफैँ राम्रो बनाउने प्रयास गरेका हुन्छन् । मेरो प्रतिस्पर्धी म आफैँ हुँ ।
भारतमा मिलन नेवार र नेपालमा मिलन अमात्यको दुईवटा परिचय छ, किन ?
भारतमा छँदा नेवार थर राखेर गीत गाएँ । नेपाल आएपछि मेरो विवाह अमात्य परिवारसँग भयो । नेवारभित्र थुप्रै थर भएकाले सजिलो होस् भनेर अमात्य लेखेकी हुँ ।
दुई देश, दुई परिचयमा बाँच्दा मनमा कस्तो कस्तो लाग्दैन ?
लाग्दैन । सुरुमा फ्यानहरूमाझ भने मिलन नेवार र मिलन अमात्य भनेको अलगअलग गायिका हो कि भन्ने परेको थियो । अहिले त्यस्तो छैन ।
आफ्नै गीतमा म्युजिक भिडियो पनि खेल्नुभएको छ । अब मोडल बन्ने हो ?
म सानैदेखि डान्स पनि गर्थें । त्यही भएर आफ्नै गीतमा खेलौँ न भनेर हो । त्यस्तो रहरचाहिँ होइन ।
नायिका बन्नेचाहिँ धेरै हल्ला छ नि ?
बन्दै बन्दिनँ । थुप्रै प्रस्ताव आएका पनि थिए ।
किन यति कठोर ?
नायिका होइन, गायिकाको परिचय नै ठीक छ, मलाई । फेरि मैले यसबारे गहिरिएर सोचेकी पनि छैन ।
प्रकाशित: फाल्गुन ७, २०७३